ABO obbo Dawud Ibsaa fi ODP:- – Kichuu
ABO obbo Dawud Ibsaa fi ODP
“Gaafa Obbo Dawud Ibsaa Asmaraa irraa mootummaa Ethiopia waliin nagaa buusuu isaanii ibsan, WBOnis biyyatti deebi’ee qaama ittisa biyyaa ta’a odeessi jedhu dhaga’amu bilisummaan Oromoo akka dhihaatetti abdatame. Tarkaanfiin kunis qabsoo hidhannoo Oromoon baroota dheeraaf taasisaa ture gara xumuraatti akka fidetti fudhatame. Ummanni Oromoo miliyonaan lakkawamus Finfinneetti argamee hoggantoota ABO biyyatti galan yeroo simatu, simannaan sun simannaa namootaa qofa hin ture. Simannaa walii galtee sanaa, simannaa xumura qabsoo hidhannaa fi simannaa jalqaba qabsoo karaa nagaa ture malee. Sababni isaas dhaabni kun akka hambaa ABO isa dhumaatti ilaalamuu isaan.
Yeroo umanni miira mirqaa kana keessa jiru; sochiin waraanaa dhihaa fi kibba Oromiyaa irraa dhaga’amaa ture ammo kan abdii sana gabbisu hin turre. Yeroo hoggantootni ABO fi waraanni Asmaraa turan qabsoo karaa nagaaf biyya seenan; warri maqaa WBOn dhihaa fi Kibba Oromiyaa keessa hidhatanii sosso’an ammo faallaa sanaarra turan. Araara sana akka hin fudhannee fi dura dhaabbatan labsan. Magaalota dhiha Oromiyaa fi kibba jiran garii dhuunfachuun caasaa bulchiinsa mootummaa diiguun kan ofiin bakka buusachaa turan…
Mootummaanis maqaa hidhattoota kana dhabmsiisuu jedhuun Raayyaa Ittis Biyyaa(RIB) naannoo kanatti bobbaase. Labsa yeroo muddamaa itti jigsuunis bulchiinsa ummataa diigee humna waraanaan akka bulan taasise. Ummanni keenya dhihaa fi kibbaas garbummaa hamaa Jalatti kufan. Guyyaa waraana RIBn, halkan namoota maqaa WBOn hidhatanii socho’an gidduutti qabaman.
Dhimma Kanaan wal qabatees himannaa fi doorsisni ABO fi mootummaa gidduutti deemaa tures dhugummaa araarichaa shakkii keessa buuse. Hoggantootni ABO “ODPn walii galtee keenya faallessee nu gane” yoo jedhan, ODPn ammo “jaroonni kun simannaa ummataan macha’anii, ammuma mootummaa ta’uu hawwan jedhan. Mootummaa hawwan kana argachuufis waraabessa guyyaa waliin wal ta’uun dhihaa fi kibbatti lola nutti bananii jiru” jechuun himatan.
Akkaataa ODPn ADO akka dhaabaatti yeroo gabaabaa keessatti xaba siyaasaa ala taasise irraa ODPn walii galtee ABO waliin Asmaraatti taasise ganuun isaa tarii mamsiisaa ta’uu dhiisuu danda’a. Namallee hin ajaa’ibu. Kan nama aja’ibuu qabu yoo waan akkasii dhalate akkamiin irra aanuu dandeenya jedhanii osoo itti hin qophaa’in biyyatti deebi’uu hoggantoota ABO ti. Seenaa darbe boodatti deebi’anii yaadachuu dadhabuu isaaniiti. Rakkoo waraana isaanii waliinis ta’e keessa isaanii jiru osoo hin xumuratin gara biyyaatti dhufuu fi waraana ofii isaanii waliin biyya keessatti atakaaroo keessa seenuu isaaniiti. Yaada kana kaasuun amma ganna darbeef mana ijaaruu ta’a. Ta’us rakkoo har’a ummanni keenya dhihaa fi kibbatti keessa jiruuf mootummaa qofatti harka qabuun furmaata hin argamsiisu. Hir’ina keessa keenyaas ilaaluu barbaachisa.
Sana caalaas ABOn erga biyyatti galeen booda rakkoo isa mudate kana tasgabbiin irra aanuurra tarkaanfii inni fudhachaa turetu waan baayyee hammeesse. Dhaabichas madaalchise. Fakkeenyaaf Ibsi karaa obbo Dawud Ibsaa medi’a irratti kennamaa ture:
“Eenyuutu eenyuun hikkachiisa? Waraanni keenya akka ofirraa ittisu ajeja dabarsineerra, Waraana keenya dabarsinee Abbootii Gadaa fi Koree tekinikaatti laanneerra, kana booda waraana maqaa keenyaan socho’u hin qabnu..” jedhu sun dhugaatti dhaabicha taajjabbii madaalaarra kan kaa’e ture.
Keessummaa waraana keenya dabarsinee Koree tekinkaatti laanneerra jechuun sun akka abbaa ijoollee isaa dabarsee abbaa buddeenaa hamaatti kenneetti ilaalame. Hambaa Waraana bilisummaa Oromoo kan ta’e murni cite lagatti hafe sun kabaja isaaniif maleen alatti namoota dhimmi hin ilaallee fi dantaa irraa hin qabaanneen bosona keessaa funaanamanii, akka adureetti areerri itti qabamee mooraatti guuraman. Sun akka Oromootti qalbii nama xuqa. Akkasuma ta’ees waraanni maqaa “WBO” qabatee lagatti hafe kaanis hoggana Finfinnee irraa adda ba’uu isaa fi hoggana mataa isaa ummatee qabsoo itti fufuu isaa addeesse.
Hogganni ABO haala akkasiin waraana isaanii waliin erga adda ba’an booda har’a haala rakkisaa ta’e keessatti qabsoo karaa nagaaf kan of qopheessanii jiran fakkaata. Ta’us maquma ABO jedhu kana dhuunfachuuf falmi fuula isaanii dura jirus salphaa hin fakkaatu.
Gama biraan caasaan dhaabichaa biyya alaa jiru baatii muraasa dura kutaa USA magaalaa Minneapolis MN ti kora gaggeeffatee ture. Kora kana irratti ajejaa WBO karaa dhihaa kan jedhamu JaalMarroo akka keessummaa addaatti toora bilbilaan dhiheessanii waliin jiraachuu isaanii ibsaniif. Gochaani caasaa dhaabichaa kunis qabsoo karaa nagaa obbo Dawudfaan Finfinnee irraa dubatanitti akka dudda gatuu isaaniitti fudhatame. Kunis quba qabsiinsa warra Finfinnee ala kan raawwatame yoo ta’eef adda ba’insa dhaabichaa mirkana godha.
Haalli danqaan kunis ABO carraa lama fuula isaa dura ka’a. Seenaa ta’ee darbuu ykn lafa hin jiretti of ilaaluu dhiisee, dhaabbatee qalbii ititaan rakkoo keessa jiruuf furmaata soqee,
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigame deebisee ijaaree, tokkoomsee, maqaa fi simboo isaa duraatti deebi’uun imala jalqabe xumura itti gochuu dha. Lachuu harka isaa keessa jira.
ABO fi dhaabonni ABO keessaa ba’anii maqaa isaanis ta’e kan biraan jiran haala akkamii keessa akka turanii fi jiran ilaalle. Kana qofaa osoo hin taanes: wal mo’uuf qawwee walitti dhukaasanii wal ajjeessan. Maqaa wal haadheessan, wal xureessan, mooraa diinaatti wal ramaduunis guddaa wal madeessan. Yeroo carraa argatanittillee diinatti wal saaxilanii dabarsanii wal kennan. Galma tokko keessa ta’uu fi xalayaa tokko irratti waliin mallatteessuullee wal balfatanii wal didan. Sun amma seenaa dha. Har’a boqonnaa biraa keessa jirra. Kunoo akkuma sirna mallattoo walti’insaa fi bu’ureeffama Gaaddisa Hoggansa Oromoo jedhame irratti agarre maqaafuu ta’u wali biratti agarre,
Dhaabonni Oromoo amma mana isaanii cufatanii ta’anii haasaa dhugaa gochuun maal akka barbaadan baruu qaba. Isa barbaadan sana argachuuf ammo maal akka isaan barbaachisu beekuu qaban. Walii isaanii gidduutti araara dhugaa buusanii tokkummaan yoo dhaabbatan qofa mo’umsa argatan. Isa kanaaf ammo of mo’uu danda’uu qaban. Ana malee isa jedhu dhiisuu qaban. Sobaa fi goyyuumsaa irraa fagaachuu qaban. Laafinni keenya diinota keenyaaf jabeenya ta’a. Jabeenyi isaanii ammo kufnee waan amma harkaa qabnu dhabuutti nu geessa. Kanaafuu martuu fiigicha isaa keessaa dhaabbatee maal keessa akka jirru haa ilaalun jedha.
ODM Imagination-ሀገራዊ ዳሰሳ ጋላ ምን ማለት ነው- Source: Ethiopia Online 2019